မြန်မာပြည်မှ ဆေးကုတာနဲ့ ဘန်ကောက်မှာဆေးကုတာ ဘာကွာလဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေး - ThutaSone
မြန်မာပြည်မှ ဆေးကုတာနဲ့ ဘန်ကောက်မှာဆေးကုတာ ဘာကွာလဲဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေး
September 11, 2019 ThutaSone အထွေထွေဗဟုသုတ 0
ဘန်ကောက်မှာဆေးကုတာနဲ့ဒီမှာဆေးကုတာ ဘာကွာလဲ မေးမေးနေလို့ ကိုယ်ခံစားမိတာနဲ့ ကိုယ်ကြုံတွေ့ရတာတွေကိုပြောပြမယ်နော် ..
အပိုင်း (၁) မြန်မာပြည်မှာ check up လုပ်ရင် ၂ သိန်းလောက်ကျရင် ဘန်ကောက်မှာ ၅ သိန်းလောက်ကျတယ် အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်တာ ၃ သိန်းကျရင် ဟိုမှာ ၁၅ သိန်းကျော်ကျမယ် CT Scan ရိုက်တာ ၄ သိန်းကျရင် ဟိုမှာက ၇ သိန်းကနေ ၁၅ သိန်းထိကျနိုင်တယ် … အစစအရာရာမှာ ဘန်ကောက်က မြန်မာပြည်ထက်ပိုများပါတယ်…
ဒါပေမယ့် အဖြေဖတ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ လူနော်အပေါ် ပြုံးချိုပြီးဆက်ဆံတာ ကောင်းတဲ့အချက်ကို အရင်ပြောပြီး နောက်ဆုံးမှ ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာ စိုးရိမ်ရတဲ့ မျက်နှာမပြတာတွေ ဆေးရုံက ဆေးရုံနဲ့မတူပဲ မွှေးကြိုင်သန့်ရှင်းတာတွေက လူနာတွေအတွက်တော့ ပထမဦးဆုံးခံစားရမယ့် အသက်ပါပဲ ..
လူနာက တခြားရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ် ဥပမာ အဆုတ်မှာစပေါ့တွေ့တာ အသည်းမှာ ဒဏ်ရာတွေ့တာ ဒီလိုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆို ဆေးစစ်တဲ့နေ့မှာပဲ အသည်းဆို အသည်းဆရာဝန် အဆုတ်ဆို အဆုတ်အထူးကုနဲ့ ချက်ချင်းပြနိုင်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဗျ .. ဆရာဝန်တွေကလည်း လူနာကို အချိန်သေချာပေးပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တယ် တိကျတဲ့ အဖြေကို တစ်ခါတည်းထုတ်ပေးနိုင်တယ် …
ထားပါတော့ဗျာ အရင်က ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်လေးတွေပြောပြမယ်နော် သူငယ်ချင်းသူဌေးတစ်ယောက်ပေါ့ ရန်ကုန်က နာမည်ကြီးဆေးရုံတစ်ခုမှာ CT Scan ရိုက်တယ် လည်ချောင်းထဲမှာ အလုံးတွေ့တယ် ကင်ဆာတဲ့ အဖြေက .. သေချာအောင် လည်ချောင်းထဲ Scope နဲ့ အသားစယူမယ်တဲ့ .. သူရော သူ့မိသားစုပါ ဘဝပျက်သလို ခံစားသွားရတော့ ကျွန်တော်က အစ်ကိုရေ ဘာမှခံစားမနေနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ကင်ဆာလို့မထင်ဘူး ကျွန်တော်တို့ ဘန်ကောက်သွားပြကြမယ် ဒီမှာ မပြနဲ့တော့ဆိုပြီး သူ့ကို ဘန်ကောက်ခေါ်သွားခဲ့တယ် ..
ဟိုရောက်တော့ ဆရာဝန်က CT scan ကိုကြည့်ပြီး တစ်ခုခုမှားနေပြီတဲ့ ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပြန်ရိုက်လိုက်တော့ အလုံးတော့ရှိတယ် လည်ချောင်းပြွန်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး အပြင်မှာ .. ဆရာဝန်ကစဉ်းစားတယ် ဘာအလုံးလဲပေါ့ ကင်ဆာမဟုတ်တာ သူ့အတွေ့အကြုံအရသိတယ် ဒါပေမယ့် သူသေချာမသိဘူး ဘာအလုံးလဲဆိုတာကို ..
နောက်ဆုံးတော့ ဆရာဝန်ကပြောတယ် ဘေးအခန်းကသွေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဆရာဝန်မကြီးကို ပြကြည့်ပေးပါတဲ့ ပြပြီးရင် သူနဲ့ဆရာဝန်မကြီးနဲ့ပေါင်းပြီး အဖြေထုတ်ပေးပါမယ်တဲ့ .. ဆရာဝန်မကြီးနဲ့ပြပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးကြတယ် ပြီးတော့မှ လူနာကိုခေါ်လိုက်တယ် အဖြေက တီဘီကျိတ် ဒါပေမယ့် လူနာမှာ တီဘီမရှ်ိတော့ဘူး တစ်ချိန်ကရှိခဲ့တယ် ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေ ..
တစ်နေ့ ဆေး ၁ လုံးပဲ တစ်လသောက်ရမယ် တစ်လနေမှပြန်စစ်ပါတဲ့ .. တစ်လနေ ပြန်သွားစစ်တော့ လူနာမှာ ဘာအလုံးမှမရှိတော့ဘူး အားလုံးပြီးသွားပြီ ..
ပိုက်ဆံ ၁၀ သိန်းလောက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့လို့ ပါလာတဲ့ သိန်းရာကျော်ပါ အကုန်သုံးပြစ်ခဲ့ကြတာ ပျော်လွန်းလို့ ..
ဒီမှာဆိုရင်တော့ အလုံးမရှိတဲ့နေရာကို အသားစယူမယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း မတွေးရဲဘူးဗျာ ….
ပါမောက္ခဆရာမကြီးသီဆိုထားတဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြောင့် အံသြဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်း
ကိုကိုအကြီးကဖင်ဘုကိုဆိတ်ကိုကိုအငယ်ကရင်ဘတ်ကိုထုတယ်ဟု ဗစ်တိုးရီးယား ထွက်ဆို
မန္တလေးကျောက်စိိမ််းဘုုရားမှ ကျောက််စိမ််းများကိုု တရုတ်ဘုရားဖူးဧည့်သည််တချို့ ယူငင််မှုဖြစ််
လာမယ့် ၂၀၂၀ မှာ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား သတင်းကြေငြာသူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်လတ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိသားစု နှစ်စု ထီပထမဆု ပြိုင်တူပေါက်
မယ်တော် ကြီး ရဲ့ လျှာကင်ဆာ ကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင် လို့ လူထွက်ပြီး အလုပ် လုပ် ငွေရှာပြီး ဆေးကုပေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး ……….
ဘုရားမပြီးသေးသဖြင့့် ခေတ္တစံပါယ်နေသော ပိတောက််တိုင််မှ ပန်းတွေအခိုင်လိုက််ပွင့်နေသော ကြည်နူးဖွယ်မြင်ကွင်း